Migrationsverket: “Labo sano waa in aad wada noolaydeen” | Somaliska
Ka dib markii la furay mideynta qoysaska caruurta leh ee Soomaalida ah bilowgii sanadkaan ayaa dad badan waxaa farxad galiyay arintaas balse hada ayaa waxaa soo baxaya in qaar badan oo ka mid ah dadkii dacwada xaraystay diidmo la siiyay.
Arinta ugu qatarsan ee ka hoos baxday dad badan ayaa ah shuruud la socotay dadka la midaynayo oo ah in qoysku uu yahay mid horay u dhisnaa. Arintaan ayaa lagala jeedaa in xaaska iyo sayga isdalbanaya ay horay u wada noolaayeen ugu yaraan 2 sano. Xitaa haddii ay caruur leeyihiin ayaa shuruudaan ay tahay mid aan la dhaafi karin.
Sidee ku ogaanayaan Laanta Socdaalku mudada aad Somaliya ku wada noolaydeen? Jawaabta waxay ka helayaan hadalkii adigu aad sheegatay, haddii aad sheegtay in saygaaga ama xaaskaaga aad labo sano ka yar wada noolaydeen hadalkaaga ayay kuu raacayaan. Haddii aad Afrika aaday oo aad soo guursatay oo caruur laguu dhalay iyaduna waa la mid.
Hadaba haddii aad qoratay in adiga iyo xaaskaaga/saygaaga aad Somaliya ku wada noolaydeen mudo ka yar 2 sano ayaa taasi macnaheeda yahay in Laanta Socdaalka ay diidmo siinayso qofka nuucaas ah, xitaa haddii DNA laga qaado oo ay caruur leeyihiin. Arintaan ayaa ka yaabisay Soomaali badan oo maalmihii la soo dhaafay ila soo xiriiray.
Si aan u raadiyo xog dheeri ah iyo haddii uu jiro xal ayaan la xiriiray Laanta Socdaalka balse waxay ka gaabsadeen in ay ii sheegeen wax ka dheeri ah faahfaahin shuruuda. Waxaa sidoo kale i saaciday Lena Rösell oo ka tirsan ururka lagu magacaabo Sociala Missionen ee u dooda arimaha qaxootiga.
Lena ayaa xiriir la samaysay Laanta/maxkamada Socdaaalka bal si ay wax uga waydiiso haddii ay jiraan wax laga qabanayo arintaan. Asxaabteeda ka shaqaysa maxkamada ayaa sheegay in aysan hada jirin wax dacwad ama go’aan ah oo ku saabsan arintaan oo maxkamadu ay hawsheeda hayso.
Dadka qaar ayaa qortay in hal sano iyo bar ay wada noolaayeen, iyagoo ay 6 bilood oo keliya ka dhimantahay in ay labo sano buuxiyaan. Arintaas ayaan waydiiyay Lena in ay macquultahay haddii xaaska ama sayga ay u safarto Afrika oo ay 6 bilood la noolaato saygeeda labo sano ma u buuxsami kartaa? Xiriirkii ay la samaysay Laanta Socdaalka iyo Maxkamada Socdaalka ayaa loo sheegay in aysan sheekadu sidaa ahayn ee loo baahanyahay in reerku ay 2 sano oo aan kala go’lahayn ay wadankoodii ku wada noolaayeen.
Shuruudaas ayaa meesha ka saaraysa wax xal ah oo loo heli karo arintaan. Waa macquul in mustaqbalka ay Laanta Socdaalka iyo Maxkamadaha Socdaalku wax ka badalaan shuruudaan adag oo meesha ka saaraysa qoysas badan oo caruur leh oo la midayn lahaa.
Dadka shuruudaan ay haysato ayaa wadada keliya ee u furan ay tahay in ay racfaan ka qaataan haddii diidmo la siiyo. Ugu dambeyn arintu waxay gaari doontaa Maxkamada sare ee Socdaalka (Migrationsöverdomstolen) oo laga yaabo in ay go’aan rasmi ah ka soo saadho arintaan.
moha walaal waxaa laigu siiyey koley waa arintaan meesha taalo oo qoraalka vwalaalkey jimcaale uu soo dhigey oo dhan aa ku qoran marka waxaan umaleenaa iney tahay sheekadaan hadaa rabtiin 10 sano xtaa is qaba hadii ilmo uu idiin dhasho markaa sverige imaatey kadib go,aankaan wuu ,ku qabanaayaa oo xixii sharciga markaa qaadatey kadib imaado kamid ma ahan dadka lamideenaayo sow saas maahan jimcaale sababtoo ah aniga inkabadan baan nolol naga dhaxaysey odeygeyga markii lajoogey somaliya waana sheegtey markaan is dhiibayey laakiin ilmahaa gadaal ka imaadey waana ii diideen oo diidmaa laisiiyey.
Asc qufkii maxkamada u gudbiyay dacwad ku saabsan mowduucaan jawabna hely plz noo sheega. mise jimcaale u gudbiya si uu nooga fahfahiya.
Su’aal aya qabaa asxaabta dhamaan
Ma jiraa ama mala maqlay qof sharciga la siiyay oo laba sano ka yar ama hada dhaw isguursaday oo ilmo isku leh
Aniga reerkayga diidmo ayaa maanta la siiyey. Annaga oo is qabna wax ka yar labo sano ayaan soo kala tagnay. Waxaana loo sheegay ´xaaskayga in ay diidmada ku mutaysatay iyada oo odaygeeda ay isla noo laayeen muddo yar. Looma cayimin sannad iyo bil toona ee wakhtiga aad is qabteen oo yaraa dartiis ayaad ku heshay diidamada ayaa lagu yidhi. Balse ay racfaan ka qaadan karto.
walaalayaal arintani waa arin aad iyo aad u liidata oo somalida oo kaliya lagu waxyeelaynayo, laakiin sharciga dunida meelna kagma taalo ilmo iyo aabe iyo hooyo in lakala kaxeeyo oo la isku diido iyagoo is dhalay oo dheecaanka DNA uu cadaynayo, wwaxaan la xidhiidhay sharciyaqaano swedish ah iyo wariye yaaal waxay ii sheegeen in ay arintani tahay wax aan marnaba la liqi karin oo aan suuro gal ahayn, markaa qofkii dhibaatadani ku dhacday fadaln number kaygan igala so hadal 0762222788 ahmeddek.
sharciyada caalamiga ah ee qoxootiga iyo sharciyada bila aadanimada ah ee u yaala dunida waa ka mamnuuc in family dhiigii DNA uu cadaynayo in ay is dhaleeen oo is qabaaan in loo diido hooyada ama aabaha oo ilmaha oo kaliya la siiyo waa wax aan marnaba dhici karayn fadlan qofkii dhibkaa la kulay numberkaygaa ha soo waco arintan cod dheer ayaynu insha alalh ku sheegi doonaaaa dhamaan haayadaha Xuquuqda Qoxootiga u dooda iyo sharciyaqaano ayaynu la tiigsanaynaaaaaaaa waxan ay qar qarinayaaan waynu soo qufaynaaaa laakiin iskaashi ayaa loo baahanyahay
MAHAD SANID AHMEDDEK WALAAL WAANA KULA SOO XIRIIRAYAA HADDA AYAGA AYAAN JAWAAB KA SUGAYAA
ahmeddek adiga miyeey kugu dhacday arintan labada sano sxb warkan meesha laga kenay waa fahmi wayay aniga
amiin marka caruur ma kuhesayna xaska mise kali bay aheed sxb
@Ahmedeeq mahadsanid walaal. @Hanad. Haa walaal waxa ay ii haysaa gabar hal sano iyo afar bilood jirta oo naaska hooyadeed aan wali ka go’in. Aniga internetka ayaan codsiga ka buuxiyey sidiii aan u sugaayey in DNA iyo interview loogu yeedho xaaska oo joogta Nbi ayaa waxaa looga wacaysafaaradda Nairobi. Waxaa loo sheegay in ay heshay jawaab diidmo ah sababtuna ay tahay iyada oo la joogtay ninkeeda muddo yar ka hor inta uu san u dhoofin Sweden. Markaas ayaa waxaa loo raaciyey in gabarta yarta ah ay u furantahay fursadda DNAga. Marka gabarta yarta ah Dheecaanka laga qaado ayaa loo sheegay in kadibna gabarta aabeheed looga qaadayo dheecaanka Sweden. Markaas ka dib hadii ay is yeeshaan ayaa waxaa lagu dhahay in gabarta loo geeynayo aabeheed adigana haddii aad raalli ka tahay. Xaaska ayaa taas ka dhaaci weyday. Wayna ku gacan sayrtay. Markaas ayaa waxaa loo sheegay in ay haysato muddo 10 bari ah in ay ku soo laabato Safaaradda si looga qaado DNAga gabarta yar kadibna aabeheed loogu geeyo hadii ay is yeeshaan ee ka soo fikir ayaa lagu yidhi.
Marka wax sharciga qodobkan ah si fiican u akhriyey ma aragteen akhyaareey oo aan ku doodno marka aan qorayno Racfaanka si aan u ogaanno. Nabadeey.
amin markaa xaskaaga marki hore ma kuqorayeen iyada and ilmahaga mise marki aad isdhibesay xaaska uun qortay kadib caruur kudhashay arinta iga so jahil bixi sxb
@Hanad. mahadsanid walaal suaalshaada. Markaan imaanayey sweden waxaan u sheegay in aan ka soo tagay xaas uur ii leh.
Marka waxaa ku qoran warqadda skattverketka in aan qabo xaas oo ay uur leedahay.